I-BELLEVUE SEO kunye NOKUFUNA IINJONGO ZENKQUBO
Umcebisi we-Bellevue SEO
Ukuba ishishini lakho alikho kwiphepha lokuqala likaGoogle, abo bakhuphisana nabo bathatha ngaphezulu kwe-85% yabathengi bakho.
Ukuba uneshishini lendawo, sele uyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukubeka inqanaba kwiziphumo zophando lwasekhaya. Ngoku ukuba i-intanethi iyeyona nto iphambili abathengi bajikela kuyo ngolwazi lweshishini lwasekhaya, ukungabonakali kuphendlo lwasekhaya kufana nokungabikho kwi-intanethi.
Ukukhangela kwasekhaya kubangela i-50% yabaphandi abahambahambayo ukuba batyelele amashishini asekuhlaleni kwiintsuku nje ezimbalwa. Okubaluleke ngakumbi kukuba uGoogle uyitshintshile ukukhangela ialgorithm ukunika amanqanaba aphezulu kwiiwebhusayithi ezenzelwe iifowuni eziphathwayo.
I-96% yabasebenzisi basebenzisa i-intanethi xa bephanda iimveliso kunye neenkonzo zasekhaya.
I-94% yabo bonke abasebenzisi be-smartphone bajonge ulwazi lwasekhaya.
Ukuba newebhusayithi yeshishini lakho kubalulekile, kodwa iwebhusayithi yakho kufuneka yenziwe ukuba ikhangele kubathengi bakho basekuhlaleni. I-36% yabathengi ithi iwebhusayithi eyilwe kakuhle inika ishishini lendawo ukuthembeka ngakumbi.
Iipesenti ezingama-32 zabathengi kunokwenzeka ukuba banxibelelane neshishini lasekuhlaleni ukuba banewebhusayithi.
I-98% yokukhangela ikhetha ishishini elikwiphepha lesinye seziphumo abazifumanayo.
Iipesenti ezingama-88 zabathengi bajonga uphononongo kwi-Intanethi ngaphambi kokuba bathenge iinkonzo zasekuhlaleni
The I-Google 3-Pack ibonakala kwindawo ephezulu kwi-93% yokukhangela ngenjongo yendawo. Kuba uGoogle uzinciphisile iindawo eziphezulu ukusuka kwizixhenxe ukuya kwezintathu kunyanzelekile ukuba ishishini lakho lendawo libe yi-SEO elungiselelwe ukufikelela kwezo ndawo zifunwayo.
Uphando lukaGoogle kwiipateni zokukhangela zalapha zibonisa ukuba abaphandi bendawo bakulungele ukuthatha inyathelo. Ngokokufunyanisiweyo kwabo, "iipesenti ezingama-50 zabathengi abaqalise ukukhangela kwindawo yabo kwi-smartphone yabo batyelele ivenkile kungaphelanga usuku olunye, kwaye i-34% ebikhangele kwikhompyuter / ithebhulethi yenze njalo." Oku kubonisa ubudlelwane ngokuthe ngqo obukwisikhundla sophendlo lwasekhaya ekugcinweni kwevenkile.
Ngokutsho kwesifundo ngoku Chitika, Iipesenti ezingama-91 zabaphandi bakhetha ishishini elikwelinye leziphumo zophando. Ukongeza, isikhundla sokuqala sendalo kwiphepha lokufumana iziphumo kwinjini yokukhangela ifumana iipesenti ezingama-33 kuko konke ukucofa.
isenselogic.com inamava eminyaka ekuncedeni amashishini amancinci nge ukuthengisa kwi-Intanethi kunye nokubonisana nge-SEO. Silapha ukunceda ishishini lakho liphumelele. Nxibelelana nathi namhlanje malunga nophicotho lwewebhusayithi yasimahla ye-SEO kunye nokukhangela amagama aphambili kwishishini lakho. Iinkonzo zethu ziqinisekisiwe. Ukuba awanelisekanga ngokupheleleyo siza kubuyisa nayiphi na intlawulo kwaye unokuzirhoxisa iinkonzo zethu.
Ukunyuswa okukhethekileyo: Nyanga nganye siza kwenza iinkonzo zeBellevue SEO zasimahla kumashishini endawo ali-10 kwinyanga enye kwigama elinye elingundoqo kunye nokwenza iphepha elinye kwiphepha. Ukuba awuchukumisekanga ngokupheleleyo ziziphumo zethu awuhlawuli. Akukho mrhumo uphambili okanye ikhontrakthi yokutyikitya.
Isicwangciso samaxabiso se-SEO or
Uphicotho lwewebhusayithi yasimahla